Deco ဖဲကြိုး Craft ဖဲကြိုး Curler Shredder: ဖဲကြိုးဖြတ်စက်များအကြောင်း
နေအိမ်/Uncategorized/Deco ဖဲကြိုး Craft ဖဲကြိုး Curler Shredder
Ribbon Shredder ဆိုတာ ဘာလဲ။?
ဖဲကြိုးဖျက်စီး ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံကို ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ခြစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကောက်နုတ်ခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။. သင့်လိုအပ်ချက်အရ ဖဲကြိုးကို ကိုက်ဖြတ်ရန်အတွက် အပေါ်မေးရိုးတွင် တပ်ဆင်ထားသော သတ္တု သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်သွားများပါရှိပါသည်။. အောက်ခြေမေးရိုးသည် အပေါက်တစ်ခု၏ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် sprint retainer ကိုလက်ခံရန်မျှော်လင့်ရသည်။. ဟိ ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး မတူညီသောဈေးကွက်များတွင် နာမည်အမျိုးမျိုးရှိသည်။. ၎င်းကို ဖဲကြိုးဖြတ်စက်ဟုလည်း ခေါ်နိုင်သည်။, ဖဲကြိုးဖျက်စီး tool ကို, ဖဲကြိုး mini ကိုအလျားလိုက်အပေါက်စက်, ဖဲကြိုးချွတ်ပါ။, ဖဲကြိုး curler, curler, ဖဲကြိုး mini ကိုအလျားလိုက်အပေါက် tool ကို, ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး tool ကို သို့မဟုတ် ဖဲကြိုးအပေါက်.
စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သော Ribbon Shredder အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး
ဤကြီးကျယ်ခမ်းနားသောကိရိယာတွင် ဗားရှင်းများစွာကို ထည့်သွင်းထားသည်။. ရလဒ်အနေဖြင့်, ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာသည်။. ရှိပါတယ် သတ္တုသွားများနှင့်အတူ ဖဲကြိုးဖြတ်စက်များ မေးရိုးအပေါ်ပိုင်းနှင့်လည်း ဖဲကြိုးခွဲစက်များ ပလပ်စတစ်သွားများနှင့်အတူ. ဤစုစည်းမှုကိုလည်း သတိပြုသင့်သည်။ ဖဲကြိုးဖြတ်စက်များ နှစ်ဆအထိ ချဲ့ထွင်သည်။ ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး curling tool နှင့်အတူ, ဖဲကြိုးအပေါက်, ဖဲကြိုးဖျက်စီး curler ရယ်, ဖဲကြိုးဖြတ်စက် စက္ကူဖြတ်စက်နှင့် အခြားအရာများစွာ.
ဤလူလုပ်ကိရိယာသည် ဘဝရှိအရာများကို ရိုးရှင်းစေရန် ရည်ရွယ်သည်။. အထူးသဖြင့် သင်ရှုပ်နေသော ဖဲကြိုးအကွေးများနှင့် ဆက်ဆံသောအခါ. အကယ်၍ သင်သည် ကတ်ကြေးကို အသုံးပြု၍ ဖဲကြိုးကို ဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် ခေါက်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊, သင်တန်းပြီးဆုံးရန် နာရီပေါင်းများစွာ ကြာပါမည်။. ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် အရာများသည် ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး သင်လိုအပ်သော ဖဲကြိုးပမာဏကို tool မှတဆင့် ဆွဲထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။. ရလဒ်သည်ရိုးရှင်းစွာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။. ဖဲခွဲထားသောဖဲကြိုးကို အသုံးပြု၍ လက်ဆောင်ထုပ်ခြင်းနှင့် ပါတီအလှဆင်ခြင်းကဲ့သို့သော ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် ဤကိရိယာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။.
ရိုးရှင်းသော်လည်း ရိုးရှင်းသော ဆွဲငင်ရုံဖြင့် ဖဲကြိုးကိုခွဲ၍ ကောက်ကွေးရန် အသုံးဝင်သော ဤကိရိယာသည် သင့်အား ကူညီပေးပါသည်။. ဖဲကြိုးအလုပ်ပြီးမြောက်စေရန်အတွက် ပါတီအလှဆင်သူများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်ဆောင်ထုပ်များကို သင်သွားရောက်ရန် မလိုအပ်ပါ။. ဤကိရိယာသည် လူများအတွက် DIY လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ဖဲကြိုးအလှဆင်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးသည်။.
ဤရိုးရှင်းသောကိရိယာသည် ဈေးကွက်သို့ အရောင်မျိုးစုံနှင့် စတိုင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိလာပါသည်။. ဒီဇိုင်းကွက်လပ်တွင် တစ်ဖက်သတ်ပါရှိသည်။, နှစ်ချက်, သတ္တု သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်သွားများ. ဤစတိုင်များထဲမှ တစ်ခုခုကို အနည်းဆုံးဖြင့် မှာယူနိုင်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။4ဒီဇိုင်းတစ်ခုစီတွင် အရောင်ပေါင်းစပ်မှု. ဤအံ့သြဖွယ်ကိရိယာဖြင့် သင်၏ဖဲကြိုးဂိမ်းကို ပိုမိုအားကောင်းစေပြီး ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေပါ။.
အဲဒါကိုလည်း မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။2မော်ဒယ်အသစ်တွေဟာ မကြာခင်မှာ ဈေးကွက်ထဲ ရောက်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။. ဤအဆင့်မြင့်မော်ဒယ်များသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်အသုံးဝင်နိုင်သည့် အမိုက်စားရွေးချယ်စရာအသစ်များ ရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
ဤကိရိယာသည် သင့်အား အထူးခြားဆုံးနှင့် ဖန်တီးမှုအရှိဆုံး အံ့သြဖွယ်လက်ဆောင်များကို ဖန်တီးရန် ကူညီပေးသည်။. ဤကိရိယာသည် နေရာများစွာကို အသုံးမပြုဘဲ အလေးချိန်သည် သင်မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။. သင်ဘယ်သွားသွား သယ်သွားဖို့အတွက် ဒီကိရိယာကို သင့်အိတ်ကပ် ဒါမှမဟုတ် လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှာ ရိုးရှင်းစွာ ထိုးလို့ရပါတယ်။. မေးရိုးအပေါ်ပိုင်းရှိ အံ့သြဖွယ်သွားများအစုံက သင့်အား များစွာသောအခက်အခဲမရှိဘဲ ဖဲကြိုးဆွဲရန် ကူညီပေးသည်။. ဤစက်ပစ္စည်းသည် ခရစ္စမတ်ရာသီအတွင်း အသုံးဝင်လာနိုင်သည်။. ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကို bounce နှင့် curling ribbon effect ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၎င်းကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။. လက်ဆောင်ပက်ကေ့ချ်များပေါ်တွင် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အပိုင်းများကို သင်ဖန်တီးနိုင်သည်။. ဤရိုးရှင်းသောကိရိယာသည် ရည်ရွယ်ချက်များစွာကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။. ဤကိရိယာကို အသုံးပြု၍ ဖဲကြိုးကို မီးပုံးပျံကြိုးများအဖြစ် ရိုးရှင်းစွာခွဲ၍ အထူးမွေးနေ့ သို့မဟုတ် မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားအတွက် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။. အံ့သြဖွယ်ဖဲကြိုးလက်ရာ၏ကောင်းမှုကို ခံစားရန် စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်နှင့် လက်တွဲလိုက်ပါ။.
RSPAC- Ribbon Shredders တွင်ခေါင်းဆောင်
RSPAC သည် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် ဦးဆောင်သူဖြစ်သည်။ ဖဲကြိုးဖျက်စီး. ဖောက်သည်သည် ၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်၏ ထိရောက်မှုကြောင့် အခြားသူများထက် ဤအမှတ်တံဆိပ်ကို ပိုမိုနှစ်သက်သည်။. ဤမှော်ပညာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်လက်ဆောင်ကိုရရှိသည့်ပုံစံနှင့် လိုက်ဖက်ရန်ပင် သင်စဉ်းစားမရနိုင်ပါ။ ဖဲကြိုးဖြတ်စက်များ. ၎င်းတို့သည် ဤထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတွင် စျေးကွက်ကို ဦးဆောင်သူများဖြစ်သည်။ 94% စျေးကွက်ရှယ်ယာ. ဤအရာသည် သင့်အိမ်တွင်ရှိရန် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။. မျိုးဆက်ဟောင်းတွေက ဒါတွေကို တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာကြတယ်။ ဖဲကြိုးဖြတ်စက်များ ဆယ်စုနှစ်များစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သော ရိုးရာနည်းလမ်းများ.
အနည်းဆုံး ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် အလှဆင်ပစ္စည်းများ
လက်ဆောင်အလှဆင်မှုများနှင့် လက်ရာမြောက်သည့် အခြားဖဲကြိုးများပေါ်တွင် အများအပြားသုံးစွဲခဲ့ရသည့်နေ့ရက်များ ကုန်သွားပါပြီ။. ဟိ ဖဲကြိုးဖြတ်စက် curlers RSPAC အမှတ်တံဆိပ်အမည်အောက်တွင်ရှိသည်။, ဖဲကြိုးအသုံးပြုသူများအတွက် ဘဝကို လွယ်ကူစေသည်။. ဖဲကြိုးအကွေးများသည် လုံးဝသစ်လွင်ပြီး ထူးခြားသောအသွင်အပြင်ကို ပေးဆောင်သည်။. လက်ဆောင်များကို ရိုးရှင်းသောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ထုပ်ပိုးနိုင်ပါသည်။. ကိရိယာများ၏ အရည်အသွေးကို RSPAC မှ အာမခံထားသည်။. ၎င်းကို အသုံးပြု၍ သင့်အစီအစဉ်တွင် စွဲမက်ဖွယ်နှင့် အရောင်ထည့်ပါ။ ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး RSPAC မှထုတ်လုပ်ပြီးစျေးကွက်ချဲ့ထွင်သည်။.
လက်ဆောင်ထုပ်ခြင်းနှင့် အခြားမွေးနေ့အလှဆင်ခြင်းများတွင် နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို လူတိုင်းက အပ်ဒိတ်လုပ်လိုကြသည်။. ၎င်းသည် အထူးမွေးနေ့ပါတီများအတွက် ပူဖောင်းအလှဆင်ခြင်းနှင့် အလွန်သက်ဆိုင်ပါသည်။. ပြုပြင်၍မရနိုင်သော အရာများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် ဤထုတ်ကုန်အပေါ် အာရုံစိုက်မှုကို ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။. သင်၏သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ဖဲကြိုးများကို အသုံးပြု၍ ဘောင်ဘီနှင့်ကောက်ကြောင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။. ဒီကိရိယာတွေကို ဖဲကြိုးသုံးပြီး စက္ကူအိတ်တွေကို ပန်းတွေနဲ့ ခေါက်လုပ်ရာမှာ တစ်ယောက်တည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။.
RSPAC သည် သင့်အား ရွေးချယ်စရာများစွာကို ပေးဆောင်ပြီး အဆိုပါရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီသည် သင့်အား တစ်မူထူးခြားပြီး မယှဉ်နိုင်သော output ကို ပေးပါလိမ့်မည်။. ဖောက်သည်သည် RSPAC အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင် စျေးကွက်တင်နေသည့် ကိရိယာများပေါ်တွင် အမြဲတမ်းအားကိုးနိုင်သည်။. ၎င်းတို့သည် နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုသူများအတွက် ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို ဦးစားပေးသူများဖြစ်သည်။. ဖောက်သည်သည် အနည်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဝယ်သူ နှစ်ဦး သို့မဟုတ် သုံးဦးအတွက် ထုတ်ကုန်ကို ဖောက်သည်က အကြံပြုသည့် "ပါးစပ်စကား" စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုအပေါ် ကြီးကြီးမားမား မှီခိုနေပါသည်။. ဤသည်မှာ နှစ်များအတွင်း ၎င်းတို့ ရရှိခဲ့သော ကျော်ကြားမှု အမျိုးအစားဖြစ်သည်။.
သင်၏ဖဲကြိုးသည် စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော လက်ရာတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။. လိုအပ်သည်မှာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး မှော်ပညာကိုလုပ်ဆောင်ရန် ဖန်တီးမှုလက်တစ်စုံ. ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းမှုကို အသုံးပြု၍ အရောင်များနှင့် အလှဆင်ခြင်းများ ပေါင်းထည့်ပါ။ ဖဲကြိုး Shredder RSPAC မှထုတ်လုပ်ပြီးစျေးကွက်ချဲ့ထွင်သည်။.
အားဖြင့် ချားလ်စ်က Wong|ဇူလိုင်လ 18 ရက်, 2017|Uncategorized|ဟာ Off comments အပေါ် Deco ဖဲကြိုး Craft ဖဲကြိုး Curler Shredder